Kushone abafundi abangu-6 ibhasi lishayisa isihlahla | News24
Kushone abafundi abangu-6 ibhasi lishayisa isihlahla
Tennessee - Ibhasi ebelithwele izingane zesikole ezingu-35 lishayise isihlahla eChattanooga, eTennessee, ngoMsombuluko kwashona abafundi abangu-6 kwathi abangu-23 baphuthunyiswa esibhedlela, kusho iziphathimandla.
Izingane ezingu-5 zitholakale sezishonile ebhasini kulandela ingozi eyenzeke ngezithuba zabo-16:00. Ingane eyodwa ishonele esibhedlela, kusho uMelydia Clewell okhulumela i-DA eHamilton County District.
OLUNYE UDABA: Kulimale abafundi engozini ePolokwane
Kunezingane ezibalelwa phakathi kwezintathu okumbulwa kwembeswa kuzo esibhedlela, kusho uClewell.
Ngokujwayelekile ibhasi lithwala izingane ezingu-35, kusho uClewell.
Kule ngozi kubandakanyeke abafundi basenkulisa nabasesikoleni samabanga aphansi abaneminyaka ebalelwa phakathi kwengu-5 nengu-10 ubudala.